TETIKASAN’NY FIADIDIANA NY REPOBLIKA : Vita ary notokanan’ny Filoha ny tanàna vaovao etsy Ankorondrano
Fotodrafitrasa maro sosona mamaly ny filàna amin’ny andavanandrom-piainan’ireo vahoaka madinika monina ao anatina Fokontany telo etsy Ankorondrano no natolotry ny Filoha Andry Rajoelina mivady azy ireo, omaly. 5 juillet 2019
Tsy toy ny teo aloha intsony fa lasa tanàna vaovao sy miavaka ny eny an-toerana ankehitriny.
Manomboka ny fanatsarana ny tanànan’Antananarivo, araka ny fanamby efa napetraky ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina. Natomboka izany tamin’ny alalan’ireo tetikasa marobe nisitrahan’ny Fokontany telo etsy Ankorondrano dia ny Fokontany Tsaramasay, Andranomahery ary Ankorondrano Andrefana. Tetikasa izay nosahanin’ny fiadidiana ny Repoblika ary ny Filoha Andry Rajoelina niaraka tamin’ny ramatoa vadiny no tonga nitokana izany sy nanolotra ireo fotodrafitrasa ireo ho an’ny mponina teny an-toerana, omaly. Nambaran’ny Filoha tamin’izany fa tsy misy zavatra tsy azo atao hampivoarana ny fiainan’ny mponina na inona na inona toerana misy azy ireo rehefa misy ny finoana, ny asa ary ny fahavononana.
Fotodrafitrasa amin’ny endrika maro mipaka any amin’ny fiainam-bahoaka eny ifotony no vita soa aman-tsara, anisan’izany ny trano fivoahana sy fidiovana iombonana, toeram-panasam-damba sy fanahazan-damba izay natao ho lasa manara-penitra ary fanamboarana toeram-pialamboly sy fakana aina vaovao ho an’ny rehetra. Ankoatra ireo rehetra ireo dia nomena endrika vaovao tsy toy ny teo aloha ihany koa ny tanàna. Tokantrano miisa 300 tafo no nolokoina ho lasa vaovao ary nasiana sary miranty sy manaitra. Nodiovina ny tatatra fandehanan’ny rano maloto, nasiana fanavaozana ny famatsian-drano sy jiro eny an-toerana. Nisy ny fananganana tsena manara-penitra ho an’ireo mpivarotra hani-masaka eny Ankorondrano sy ny manodidina. Nampanantenain’ny Filoha tamin’ireo mponina ihany koa fa tsy maintsy harenina avokoa ireo andrin-jiro mba hanome hazavana ny tanàna amin’ny alina. Isan’ireo Faritra iva eto an-drenivohitra ireto Fokontany nasiana fanatsarana ireto. Na faritra iva aza, hoy ny Filoha dia tsy voatery hiaina ao anatin’ny loto fa afaka miova ho maoderina sy mamiratra.
“Tsy hoe rehefa aty amin’ny tanàna ambany dia tanàna maloto fa azo atao tanàna madio, ary afaka mikojakoja izany isika. Ny ety ambany tanàna no hovaintsika voalohany, asiana tsena manara-penitra, asiana toerana fanasana lamba ary asiana toerana fidiovana. Matetika rehefa tonga aty ireo mpamatsy vola dia takotakonana ny aty ambany tanàna. Fa ho antsika na dia sahirana aza ny olona aty dia mavitrika, mitraka ary afaka miasa ny olona aty”, hoy ny Filoha Andry Rajoelina raha nitafa mivantana tamin’ireo vahoakan’Ankorondrano. Nambaran’ny Filoha fa tetikasa fanombohana ihany ity notokanana ity fa mbola maro ireo faritra iva eto Antananarivo no hodiovina sy hitondrana fanatsarana tahaka ny natao teny amin’ireo Fokontany telo ireo. Velom-pisaorana ny fitondram-panjakana izay tarihan’ny Filoha Andry Rajoelina ny vahoaka teny an-toerana. Hafatra lehibe nomen’ny Filoha azy ireo ny mba hahaizana mikojakoja ny fananana iombonana nomena azy sy hitandro hatrany ny fahadiovan’ny tanàna.